भूगोल बी को लागि तैयार हो रही छ
भूगोल मधेसको लागि तयारी गर्दै
9 सुझावहरू र प्रविधिहरूले भौगोलिक बीमा जित्न मद्दत गर्छन्
भूगोल बी, अधिक भौगोलिक भौगोलिक मधेसको रुपमा जानिन्छ स्थानीय स्तरमा र विजेता वाशिंगटन डीसीमा अन्तिम प्रतिस्पर्धामा काम गर्दछ।
भूगोल मध्याह्न डिसेम्बर र जनवरी मा संयुक्त राज्य भर को चौथो आठऔं कक्षा को विद्यार्थीहरु संग स्कूलहरु मा शुरू हुन्छ। प्रत्येक विद्यालय भूगोल मधुमेहले मधुमेहलाई आफ्नो विद्यालयमा जित्ने लिखित परीक्षा लिन्छ। प्रत्येक राज्य बाट एक सौ विद्यालय विजेता नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटी द्वारा एक लिखित परीक्षा मा आफ्नो स्कोर मा आधारित, अप्रिल मा राज्य स्तर फाइनल मा जान्छ।
हरेक राज्यमा भूगोल बी विजेता मईमा दुई दिनको प्रतियोगिताको लागि नेशनल ज्योग्राफिक मधेस वाशिंगटन डीसीमा क्षेत्रीय आय। पहिलो दिन 55 राज्य र क्षेत्र (कोलम्बिया जिल्ला, भर्जिन टापु, प्यर्टो रिको , प्रशांत क्षेत्रहरू र विदेश अमेरिकी रक्षा विभागका विभाग) विजेताहरू दस फाइनलका क्षेत्रहरूमा सीमित छन्। दस फाइनलहरू दुई दिन प्रतिस्पर्धा गर्छन् र विजेताले घोषणा गरेको छ र एक कलेज परिसरमा जित्छ।
आफैलाई मक्खीको लागि तयारी गर्दै
यस पछि के मेरो टिप्स र प्रविधिहरू तपाईले राष्ट्रिय भौगोलिक बी (पहिल्यै नेशनल भूगोल बी भनिन्छ तर नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटीलाई आयोजक हुनुहुन्छ) को लागि तयार गर्न मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे)।
संसारको नक्सा, विश्व, एटलससँग सुरू गर्नुहोस् र महाद्वीप, देश, राज्य र प्रांत, द्वीप, र हाम्रो ग्रहको प्रमुख भौतिक विशेषताहरूसँग धेरै परिचित हुनुहोस्।
यस जानकारीमा आफैलाई परीक्षण गर्न संसार र महाद्वीपहरूको नक्सा रेखाको प्रयोग गर्नुहोस्। देशको, रिजर्भेसन , प्रमुख जल निकायहरू, र प्रमुख शारीरिक सुविधाहरूको सम्बन्धी स्थानलाई थाहा छ मधुमेहको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। राम्रो बुझ्न पनि निश्चित हुनुहोस् जहाँ अक्षांश र देशान्तरको प्रमुख लाइनहरू झूटो छ।
धेरै अभ्यास गर्न सकेसम्म सकेसम्म लिनुहोस्। मेरो साइटले सैकड़ों बहुविध विकल्पको अभिलेख प्रदान गर्दछ भूगोल प्रश्नहरू जुन निश्चित रूपमा मद्दत गर्नेछ। नेशनल ज्योग्राफिक दैनिक जियबी क्विज अनलाइन प्रदान गर्दछ। मेरो टेस्टमा थप अनलाइन क्विजहरू तपाईका ज्ञानहरूका ज्ञान संग्रहहरू छन्। तपाईंले छुटेको प्रश्नहरू हेर्न वा बुझ्न एटलस प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्।
फ्लैश कार्डहरू तयारी गर्नुहोस् वा संसारका देशहरूको राजधानी र पचास संयुक्त राज्यका कैपिटलहरू सम्झनको लागि केही अन्य प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्।
यी आधारभूत तथ्याङ्कहरू , विश्वभरको सबैभन्दा उच्चतम, निम्नतम, र गहिरो बिन्दुहरू याद गर्नुहोस् , र अन्य भौगोलिक अतिवादीहरू अध्ययन गर्नुहोस्।
अखबार, समाचार पत्रिकाहरू पढ्नुहोस्, र मेरो भौगोलिक न्यूजलेटर र भूगोल 101 ईमेल कोर्सको सदस्यता लिगोग्राफरको बारेमा सिक्न र विश्वभरका प्रमुख समाचार घटनाहरूको साथमा रहनको लागि। केहि बीई प्रश्नहरू वर्तमान घटनाका भूगोलबाट आउँछन् र यी घटनाहरू सामान्यतया ती व्यक्तिहरू हुन् जसले मधुमक्कै अघि वर्षको अन्तिम भागमा हुन्छन्। तपाईंले एटलसको सामना गर्नु भएको कुनै पनि अपरिचित ठाउँमा नामहरू हेर्नुहोस्।
मूल भाषाहरू, मुद्राहरू, धर्महरू र पूर्व देशका नामहरू जान्न निश्चित रूपमा एक बोनस हो। राज्य र राष्ट्रिय स्तरमा यो महत्त्वपूर्ण छ। यो जानकारी सीआईए विश्व तथ्य पुस्तिका बाट सर्वोत्तम प्राप्त हुन्छ।
शारीरिक भूगोल को नियम र अवधारणाहरु संग परिचित हुनुहोस्। यदि तपाईले भौतिक भूगोलको शब्दावली र मुख्य अवधारणाहरूको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भने कलेज-स्तरको भौतिक भूगोल पाठपुस्तिकाबाट, त्यसो गर्नुहोस्!
1 999 को राज्य फाइनलमा, विदेशी प्रजातिहरूमा समर्पित एक कठिन राउन्ड थियो तर हरेक प्रश्नको जवाफ दुई स्थानहरू बीचको छनोट थियो त्यसैले राम्रो भौगोलिक ज्ञानमा गोल गर्न जित्ने सबै भन्दा सरल तरिका थियो। मेरो पुस्तक, भूगोल मधुमेह पूर्ण तैयारी पुस्तिका: 1,001 प्रश्नहरु र जवाब को लागि मदद को तपाईं फेरि फेरि र फेरि! , स्कूल, राज्य, वा राष्ट्रीय स्तर मा मधुमेह को लागि तयारी गर्नेहरूको लागि एक उपयोगी संसाधन हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय पोर्ट शहरहरू
भूगोलको5विषयहरू
ग्रीनल्याण्ड र अष्ट्रेलिया: तरकारी वा होइन?
कुन संयुक्त राज्य अमेरिका रियालिटी पछि नामित छन्?
मंगामा बस्दैछ: भाग 2
मल्टी नेशनल नेशनल च्याम्पियनशिप संग कोच
धन्यवाद गणित शब्द समस्याहरु को लागि विचार
अजीब पाठ सन्देशहरू
"ट्रिक" कविता: रबर्ट फ्रस्टको "गाइड" को लागि एक गाइड
IQ के हो?
Loreto बे को गाँउहरु, मेक्सिको: फोटो गैलरी
पछाडीका लागि कम पली पंक्तिहरू: शरीर निर्माणको व्यायाम विवरण
अधिकांश इलेक्ट्रोनटेक्टिभ तत्व के हो?
एक विस्तारित प्रतिक्रिया वस्तुले विद्यार्थी शिक्षा सिक्न सक्छ
हरक्यूल्स अकसर गरेए प्रश्न र तथ्य पाना
शीर्ष 10 'दारिया' एपिसोडहरू
सर्वश्रेष्ठ 1970 को बच्चाहरु को संगीत
गोन्डलवाल बली, गोविन्द गोयल
यासाका एंटी पावर टेबल टेनिस रबर समीक्षा
युवा बालबालिकाका लागि पुस्तकहरुका आधारमा सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरु को चलचित्र
ल्यान्डस्केप चित्रकारी के हो?
Monoprotic एसिड परिभाषा
प्रागैतिहासिक मार्शल तस्वीरहरु र प्रोफाईलहरू
वैकल्पिक ईन्टरमा स्विच गर्न शीर्ष कारणहरू
10 कालो विधो मकवानहरूको बारेमा आकर्षक तथ्य
5 सामाजिक भावनात्मक प्रतिस्पर्धा सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिन्छ